Ingabe adume kakhulu ku Abkhazia emihumeni esiyingqayizivele kwamiswa eminyakeni eyizigidi edlule. Shono izwe zokungcebeleka olunothile neziqongo ezembethe seqhwa ngokuthi ipharadesi labo bonke abathandi emhlabeni komhlaba, ngoba lapha kukhona emithambekeni Wabasaqalayo kanye nezifundiswa. Namuhla indaba yethu mayelana izinto adumile esifundeni, edonsa izivakashi eziningi.
Mhlawumbe edume kakhulu yile okuthiwa evulekile ngo-1961, emhumeni ngobukhulu kuleli zwe. Athos (Abkhazia), esisogwini olusentshonalanga Black Sea, idume nezindawo ezinhle hhayi kuphela, kodwa futhi anencazelo engokomoya Monastery kanye obumangalisayo wonder zemvelo.
Kutholwe emaqaqasini ezintabeni Iberia Luhambo isikhathi eside ayikaziwa umphakathi, nakuba abendawo babeyazi emgodini okwesabisayo ongagcwali, lapho kungekho muntu owayeke alokothe ukwehlela iyiphi daredevil. iminyaka engu-55 kuphela edlule, owaziwa kokuphelele uvuliwe emhlabeni emhumeni.
Ekuqaleni, ososayensi eyabhekana nesimo esidumazayo esabekayo. Ukufinyelela phansi, abacwaningi bathola odongeni zingezona ezibonakalayo ngodaka, kodwa kamuva yathola emangalisa ubuhle ihholo, Admire ukubonwa speleologists eziningi. Kwabe sekuvela ukuthi, Athos ibhidlike Abkhazia ithule imicebo yangempela ukuthi namuhla angahlola ngamunye.
A hambo oluthakazelisayo
sekudlule iminyaka elitshumi lane sasetshenziswa engadini okusha Athos Cave futhi ukuqinisekisa Uzalo ukhululekile ukuba phansi. Ukudalwa zemvelo ziyingxenye zokungena ezine, ezintathu zazo zadalwa okwenziwe kanye kuphela emgudwini ongokwemvelo ophahleni kuyinto "Anakopiya" ihholo.
Manje umnyango eHayidese elise isakhiwo nokuphatha, lapho ungakwazi ukuthenga izinto eziyizikhumbuzo namatshwayo womhume edume kakhulu Abkhazia (isithombe okusesihlokweni esithi), akwazi ukugcina nge izindaba mayelana nezwe eliyingqayizivele futhi adle lapho kudlelwa khona ngaphambi kokuqala uhambo olujabulisayo.
Kuyathakazelisa ukuthi emahholo komhlaba zezivakashi unika ekhethekile isitimela ezokuthutha Umhubhe. Ubude umzila imayelana ezimbili amakhilomitha, kodwa ukubuka izivakashi ongaqeqeshiwe, akubona bonke emihumeni.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ngemva Georgian-Abkhaz ukungqubuzana izihloko amahholo ashintshiwe.
"Anakopiya" ( "Abkhazia")
Ihholo lokuqala iyatholakala ukubukwa - the ejulile. Ubude "Anakopii" kokuba ukuma kwesikhwama side, imayelana 150 amamitha. Okuthakazelisayo phansi engavamile, embozwe amabhlogo itshe futhi enamandla ubumba nezixhobo kwakhiwa ngemva kokubhujiswa namathempeli ngokhonkolo namatshe.
Leli kamelo grey singethuki imibala kanye amathoni okuqinile izindonga egumbini sivale indlela engena emgedeni ophilisa obala nge Tint umbala ogqamile. Nge ukukhanya ezinodaka yakhe yamanzi engaphansi kwenhlabathi amachibi, ukufihla ebumnyameni, ukudlala Emerald. Ngokuvamile lokhu igumbi Ugcwalise amanzi abilayo, okuyinto udla izindwani wafinyelela lwaleli limestone elenza Ukuvakashela emhumeni Abkhazia engenakwenzeka, futhi kuphela emva ukwakhiwa inkinga amanzi yaxazululeka.
Muhajirs Hall (Ehholo speleologists Georgian)
Ikamelo ngobukhulu, kanye yaqanjwa owathola, ibanga 260 amamitha. Ihlukaniswe yaba izingxenye eziningana amabhlogo omkhulu, ke kuyokushiya umangele nemihosha ngobumba umsuka engaziwa uphondo yagcwala hhayi ngamanzi kodwa ngodaka. Ngezikhathi Basin kuvula futhi kukhona liphuma echibini Murky, saphinde phansi ngemva kwamahora ambalwa.
Phakathi komgodi wentaba-mlilo siyintaba calcium mhlophe ukuthi ubukeka yayenza ngokungacabangi ngokuphelele. Hall lihlukile kwezinye kumnandi kwenkundla okusikhumbuza ebusweni kwenye iplanethi. Kukhona isikhathi eside futhi eliphakeme ibhuloho emhumeni, eyakhelwe ukuphepha izivakashi. imitha-120 viaduct esabizwa ngesikhukhula, njalo ngemuva kokubuka Igumbi inikeza platform wokubuka Illuminated, lapho ungenza izithombe amahle uphumule ngaphansi ethela umculo soft.
"Isihlibhi" (Clay Hall)
Egumbini elilandelayo izidalwa eziphilayo eziye zatholakala, okuyinto iyahlule ukuphumula. Ngo amanzi echibini komhlaba uhlalwe ezinamagobolondo ayevumela futhi trehus - ibhungane ngaphandle amehlo, okuyinto siziswele izinhlaka umbono akagcini ngokushesha ukubhukuda bese ugibela etulu izindonga engalingani.
Zonke amachibi emhumeni, okuyinto kuhlobene ukwakha uhlelo olulodwa emfuleni Mtsyrhoy. Futhi ngokusebenzisa leli hholo, embozwe izingqimba zodaka, iza ukugeleza eyinhloko yamanzi, okuyinto Ugcwalise ingxenye ibhidlike Abkhazia.
"Apsny" ( "Tbilisi")
Penda eHayidese kwanda eduze kwamanzi. Khanyisa izibani ngesenzakalo crystal, ekuzuzeni shades Amazing kakhulu. ekamelweni elikhanyayo, okusikhumbuza esigodlweni lwasemaphusheni, ezazidume ngokutshala amahlukuzo elilengayo. Yemilingo landscape sivale indlela engena emgedeni esiyingqayizivele, anombala ocwazimulayo ngemibala ehlukene, eshiya kwakuhlala isikhathi eside.
Ngesikhathi inhliziyo enhle 'Apsny "kuyinto eqandisiwe impophoma calcium, hhayi lathinta phansi nje amamitha ambalwa. Kusukela umbukwane emangalisa izivakashi, okuyinto zingene ubuhle Mother Nature, transfixed injabulo umoya.
iminyaka abangaphezu kwezigidi ezimbili isimangaliso engokwemvelo okusha Athos abantu bambalwa ababazi, futhi manje abavela kulo lonke elase rush globe ukuze izivakashi ukuze bajabulele ubuhle womhume ngobukhulu komhlaba e Abkhazia.
Akubona bonke yobuciko zemvelo ingabonwa ngaphandle nemishini ekhethekile. eziyinkimbinkimbi eziningana emigedeni ukuze abacwaningi ezweni, futhi omunye wabo mlando zendawo, wavula ngo 1960.
umbuso komhlaba elise Gagra yokhalo uhlelo kwemithombo mpo oxhumene zemibukiso. Azikho egandayiwe izintaba, ngakho phansi Kunconywa kuphela njengengxenye yeqembu okhokhelwayo.
Branched Crow Umgede e Abkhazia, isifundo esikhulu olwaqala ekuqaleni kwaleli khulu leminyaka, waqaphela njengoba ejulile emhlabeni. Kwaphela iminyaka eminingi, lesi siqu komhlaba isiFulentshi, kokushiya kule emathunjini omhlaba ngesikhathi 1600 amamitha.
Speleological uhambo arabica afanayo labetibambile izikhathi eziningana ngonyaka, futhi ngemva kwesifundo ngasinye, abacwaningi kushiwo ukukhululwa kwe-ukujula entsha. Ukwambulwa emhumeni itholakala endaweni engamamitha mayelana 2.200 amamitha ngaphezu kolwandle.
Enye intaba ubuhle ethandwa itholakala edolobhaneni Otap. Remote kusukela nemizila izivakashi eyinhloko, namanje izinkulungwane zabantu abahambi, kuyaqapheleka ukuthi lena umbuso wangempela lime ukugcwala kwamanzi. Elilengayo ukuthi luhlanganise phansi, amakholomu kanye imilingo stalagmatov igalari stalagmites ekuyigxiliseni. Kubonakala sengathi izivakashi Abrskily wangena inganekwane emangalisayo, kusukela lapho ungafuni ukuphuma.
Akhiwe Khosta wesifunda ohlelweni ngomshoshaphansi has 14 kokwenziwayo, lidume Abkhazia libalele. Umgede axhumene, imivubukulo yavama. Ngezinye izikhathi ezahlukene, ososayensi baye bathola abantu basendulo lapha namathambo indoda nezakudala. A sebuningini emihumeni sokujabulisa elilengayo multimeter nezimpophoma ngomshoshaphansi.
Uhambo singene engaphansi inganekwane
Ngeshwa, isibalo esikhulu sezithunjwa yobuciko zemvelo angaliboni, kodwa abaningi emihumeni engafani eyaziswa ngokuthi embuthanweni elincane ochwepheshe. Ngo imigodi eminingi ongagcwali ukuba uhambe ephephile, kanye nalabo abafuna ukuzama esandleni sabo, kuyafaneleka ukukhumbula nomswakama eliphezulu futhi lokushisa ongaphakeme.
Indlela engcono kakhulu ukuzibonela mathupha emihumeni eziningi of Abkhazia - uhambo, okungase oyi-ibibhukelwe. Ezokuzijabulisa futhi ezemfundo izinhlelo for amaholide zihlanganisa ukuhlolwa ezihehayo kakhulu zaleli zwe.
Sihambe emhumeni ahlomele ukuvakashela avule umnyango emhlabeni ongaziwa, okunikela okuvelayo acacile ujwayele komhlaba inganekwane.
Ayelapha knotweed: entsha eside ezaziwayo